လှကျော်ဇော – ၁၉၄၂-မြောင်းမြ ကရင် – ဗမာ အရေးအခင်း (နောက်ဆက်တွဲ) | MoeMaKa Burmese News & Media
ဖေဖေက အဲဒီစာဖတ်ပြီး အတော်စိတ်မကောင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူတောင်းဆိုသလို လုပ် ပေးလို့ မဖြစ်ပါဘူး။ နအဖခေတ်မို့ သိပ်လည်းတင်းကျပ်ပါတယ်။ တော်ကြာ ကိုယ့်စာကြောင့် သူပဲ ဒုက္ခရောက်မှာ စိုးရပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဘယ်နေ့ဘယ်ရက်က ဘယ်သတင်းဌာနက မေးမြန်းခန်းမှာ ဒီလိုဒီလိုပြောသွားတယ်….ဆိုတာလောက်ကိုပဲ ရေးဖို့အကြံပေး တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်။ သဘော ကတော့ – ဖေဖေနဲ့တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်တာမဟုတ်ဘဲ၊ တဆင့်ကြားရတယ် …. ဆိုတဲ့ပုံ ဖြစ်အောင်ပါ။ အခုကြည့်ရတာကတော့ ကျောက်တိုင်ထူခွင့်လည်း ရခဲ့ဟန်မတူပါဘူး။
One Response to လှကျော်ဇော – ၁၉၄၂-မြောင်းမြ ကရင် – ဗမာ အရေးအခင်း (နောက်ဆက်တွဲ)
yekyawthu on September 23, 2016 at 5:56 am
Thank you for the article. I will look for the books of your father